fanomezana | Martin Vrijland
Home » fanomezana
Nandritra ny efa-taona mahery, i Martin Vrijland dia niasa tamin'ny fanadihadiana mafonja ny vaovao, fanararaotana ara-politika sy ara-tsosialy. Mba hahafahana mandroso, dia tena ilaina tokoa ny fanohanana anao. Olona Holandeana maro no vonona hanao famandrihana amin'ny gazety amin'ny gazety. Raha mahita ny lanjan'ny laminasa Martin Vrijland bebe kokoa, dia azonao antoka fa afaka manohy ny asany izy. Jereo eto fanazavana manokana mikasika ny toe-javatra misy an'i Martin Vrijland. Azonao atao ihany koa ny manome fanomezana be loatra (isam-bolana) na fanomezana avy amin'ny banky mivantana. Ny tranonkala mpitsikilo dia mampiseho tsara ny habetsaky ny fanomezana, noho izany dia azonao atao ny mahazo azy ireo. Misaotra anao noho ny fanohanana anao!
Manorata Paypal na i-Deal (bola amin'ny banky)
amin'ny anaran'i Martin Vrijland
Amin'ny alàlan'ny fanangona vahoaka
Tsindrio ny faneva:
Fanomezana isam-bolana amin'ny Paypal